“Ma Jiraan wax la qarinayo.”.- Mourinho oo si cad uga hadlay arrinka Sanchez – Gool FM
“Ma Jiraan wax la qarinayo.”.- Mourinho oo si cad uga hadlay arrinka Sanchez
Byare January 19, 2018
(Manchester) 19 Jan 2018. Jose Mourinho ayaa sheegay inuu wax fikrad ah ka heysan sababta uu Alexis Sanchez uu ilaa iminka u ahayn laacib Manchester United ah.
Saraakiisa Old Trafford ayaa ka shaqeynayay sidii ay Arsenal ula dhammeyn lahaayeen heshiiska weeraryahanka reer Chile ee lagu qiimeeyay 35-ta milyan oo bound iyadoo uu dhanka kalena u wareegayo laacibka qadka dhexe ee Henrikh Mkhitaryan.
Mourinho ayaa daaha ka rogay inuu doonayay in Sanchez uu qeyb ka noqdo qorshihiisa kulanka berito ay Man United ugu safrayaan gegada Turf Moor, laakiin Red Devils waxay ahayd inay Duhurkiiba diiwaanka gishtaan Sanchez si loogu ogolaado inuu ciyaaro kulanka.
Balse waxay u muuqataa inaysan midaa dhicin iminka.
Sheekada waxa cakiraya waa Mkhitaryan kaa oo ay Man United u adeegsaneyso heshiis is waydaarsiga lacagta la socota ee Sanchez kaa oo weli heshiis shaqsi ahaaneed la gaarin Gunners.
Mourinho oo Maanta ka soo muuqday shirka Jaraa’id ayaa yiri:
“Sanchez? Wax ka cusub ma jiraan, waxaan aaminsanahay in sida cad uu qofkasta ogyahay inaan halkaa joogno gaar ahaana marka uu Arsene Wenger uu si cad uga hadlay arrinka Sanchez sidii uu sameeyayba.
“Ma jirto waxaan isku qarineyno amaba wax la dafirayo, laakiin weli ma jiraan heshiis dhacay.
“Waqti xaadirkan Mkhitaryan waa ciyaaryahankeena, Sanchez waa ciyaaryahan ka tirsan Arsenal, maadaama uu beri jiro kulan waxaan doonayaa inaan midan iska daayo aana diirada saaro waxa ugu muhiimsan, taa oo ah kulanka.
Mourinho oo wax laga waydiiyay inay helaan Sanchez ay ku xiran tahay in Mkhitaryan uu heshiis la gaaro Arsenal ayaa yiri.
“Ma garanayo. Waan ka baxay, si dagan ayaan ku sugi doonaa Akhbaarta, ma jiraan wax intaa ka baxsan, ku lug lahaanshaheyga kulanka waa inaan iraahdaa sababaha aan u jeclaan lahaa inaan helo ciyaaryahanka, wax intaa ka badana ma jiraan, waan ka baxay.”.
Wakiilka Edin Dzeko oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Chelsea
"XANUUN", - Wenger oo sheegay ku biirintaankii Van Persie ee Man United iyo Sanchez oo hadda lagu wado midka u XANUUN badan Gunners!